ပြတ်ပြတ်သားသား အဖြေပေါ်သွားတဲ့ အုပ်စုများ ၊ ကိုဗစ်ကိုက်တဲ့ ဘိုင်ယန် ၊ ချဲလ်ဆီး ရဲ့ သန်း ၈၀ တန် ပစ်မှတ် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
ပြတ်ပြတ်သားသား အဖြေပေါ်သွားတဲ့ အုပ်စုများ ၊ ကိုဗစ်ကိုက်တဲ့ ဘိုင်ယန် ၊ ချဲလ်ဆီး ရဲ့ သန်း ၈၀ တန် ပစ်မှတ် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
မနေ့ညက ကစား ခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ်တွေ အပြီးမှာတော့ အုပ်စု အချို့ကနေ ရှုံးထွက် အဆင့် တက်ရောက် နိုင်တဲ့ အသင်းတွေ ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။ အချို့ အုပ်စု တွေကတော့ ပွဲစဉ် ၅ မှာတင် ပြီးပြတ် သွားကာ ဘယ်သူက ရှုံးထွက် ၊ ဘယ်သူက ယူရိုပါလိဂ် ဆိုတာ အဖြေထွက် သွားခဲ့ ကြပါပြီ ။
လီဗာပူး ကတော့ မရဏ အုပ်စုမှာ ရာနှုန်းပြည့် အနိုင်နဲ့ ရှေ့ဆက် နေပါတယ် ။ မနေ့ညကလည်း အိမ်ကွင်းမှာ ပေါ်တို ကို ၂-၀ နဲ့ အနိုင် ကစားပြီး မိုဆာလာ နဲ့ အယ်ကန်ထရာ တို့က ဂိုးတွေ သွင်းပေး ခဲ့ကြပါတယ် ။
အေစီမီလန် ဟာ အဝေးကွင်းမှာ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် ကို ၁ – ၀ နဲ့ အနိုင် ကစားခဲ့ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ရှုံးထွက် မျှော်လင့်ချက်တွေ ရှင်သန်လာခဲ့ပြိး နောက်ဆုံး ပွဲစဉ် အထိ တိုက်ပွဲဝင်ခွင့် ရရှိ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အင်္ဂလန်မြေမှာ ကစားခဲ့တဲ့ နောက်တပွဲ မှာတော့ မန်စီးတီး ဟာ PSG ကို ၂-၁ နဲ့ အနိုင်ယူပြီး အုပ်စု ပထမ နေရာကို ပွဲစဉ် ၅ မှာ သေချာ သွားစေခဲ့ ပါတယ် ။
PSG ကလည်း တတိယ နေရာက အသင်း နဲ့ အမှတ်ကွာသွားပြီ ဖြစ်တာကြောင့် ဒုတိယ နေရာ နဲ့ ရှုံးထွက် အဆင့်ကို တက်လှမ်း သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
ရီးရဲ မက်ဒရစ် ရဲ့ အုပ်စု D မှာတော့ အင်တာမီလန် ဟာ ရှက်တာဒိုးနက် ကို အနိုင် ကစားပြီး ရှုံးထွက် အဆင့်ကို တက်ရောက် လာနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီနှစ်မှ ချန်ပီယံလိဂ် ကို ဝင်ကစားတဲ့ ရှရစ် အသင်း ကတော့ ရီးရဲ မက်ဒရစ် ကို ရှုံးခဲ့ပေမယ့် ရှက်တာဒိုးနက် ရဲ့ အရှုံးကြောင့် အုပ်စု တတိယ နေရာ သေချာ သွားကာ ယူရိုပါလိဂ် ကို ဝင်ခွင့် ရရှိ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ လိုင်ယွန် နည်းပြဟောင်း ရူဒီဂါစီယာ ၊ ဒေါ့မွန် နည်းပြဟောင်း လူစီယံ ဖာဘရီ နဲ့ ဘာစီလိုနာ နည်းပြဟောင်း အာနက်စ်တို ဗယ်ဗာဒီ တို့ နဲ့ ဆက်သွယ် စကားပြောဆို ထားတယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
အီတလီ လက်ရွေးစင် နည်းပြ မန်စီနီ နဲ့ စပိန် နည်းပြ အန်နရီကေး တို့ကတော့ သူတို့ လက်ရွေးစင် အသင်းတွေကို ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲ ပြီးသည်အထိ တာဝန်ယူသွားဖို့ ဆန္ဒ ရှိနေကြပြီး မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နည်းပြ ရာထူးကို စိတ်မဝင် စားကြဘူးလို့ သိရ ပါတယ် ။
ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဟာ ဂျာမနီ မှာ ကိုဗစ် ကူးစက်မှု ဖြစ်လာတဲ့ ၅ သင်းမြောက် ဘောလုံး အသင်း ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဘိုင်ယန် တိုက်စစ်မှူး ချိူပိုမိုတင်း နဲ့ နောက်ခံလူ ကစ်မစ်ချ် တို့ ဟာ ကိုဗစ်ပိုးတွေ တွေ့ရှိ ခဲ့တာကြောင့် ၁၄ ရက် ကွာရန်တင်း ဝင်ကြတော့မှာ ဖြစ်ပြီး ဘာစီလိုနာ နဲ့ ကစားမယ့် ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲ ( ဒီဇင်ဘာ ၉ ) ကို လွဲချော်မယ့် အနေအထားတွေ ရှိလာခဲ့ ကြပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အသင်းဟာ ဆွစ်ဇာလန် ကလပ် ဘေဆယ် မှာ ကစားနေတဲ့ ဘရာဇီး ရှေ့တန်းလူ အာသာ ကာဘရယ် ကို ဇန်နဝါရီ မှာ ခေါ်ယူဖို့ ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ် နေတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် နည်းပြသစ် အက်ဒီ ဟိုဝီ ကတော့ ဒီတပတ် စနေမှာ ကစားမယ့် အာဆင်နယ် နဲ့ ပွဲမှာ အသင်းသစ် ကို စတင် ကြီးကြပ် နိုင်မလား ဆိုတာသိရဖို့ အတွက် ဆေးစစ်မှု အဖြေကို စောင့်ဆိုင်း နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။ ဟိုဝီ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ် တုန်းက ကိုဗစ်ပိုး တွေ့ခဲ့တာကြောင့် နယူးကာဆယ် နဲ့ ပွဲဦးထွက် ပွဲကို ကိုင်တွယ်ခွင့် မရခဲ့ပါဘူး ။
ချဲလ်ဆီး ဟာ ဇန်နဝါရီ မှာ အသင်းနဲ့ အံမဝင်တဲ့ ကစားသမား အချို့ ကို ရောင်းထုတ်ပြီး ယူဗင်တပ် တိုက်စစ်မှူး ဖက်ဒရီကို ချီယေဆာ ကို ပေါင်သန်း ၈၀ အထိ ပေးချေကာ ခေါ်ယူဖို့ စဉ်းစား နေတယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
Previous Article တီယာဂိုကို ယူနိုက်တက် ဂန္တ၀င်နဲ့ ခိုင်းနှိုင်းလိုက်ကာ ပေါ်တိုနဲ့ပွဲမှာ လီဗာပူး ကစားသမား တစ်ဦးနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် စိတ်ပူမိတယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ အို၀င်
Next Article အာလင်းဟာလန်း ရဲ့ စံချိန်ကို ရိုက်ချိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် မင်းသားသစ် ဆီဘတ်စတီယန် ဟေလာ